Shirka Wasiirada Arrimaha Gudaha DF iyo Dowlad Goboleedyada oo la soo gabagabeeyay | Jowhar Somali News Leader
Shirka Wasiirada Arrimaha Gudaha DF iyo Dowlad Goboleedyada oo la soo gabagabeeyay
Shirka Wasiirada Arrimaha gudaha Dowladda Federaalka iyo Dowladda Goboleedyada oo ka socday Magaalada Muqdisho ayaa Galabta lasoo Gaba gabeeyey.
Shirkaan oo Hal ku dhiggiisu ahaa (Kulanka Madasha Wadatashiga Wasaaradaha Arrimaha Gudaha, Dib u heshiisiinta iyo Gobolka Banaadir Hanaanka Qaran ee Wadajir) ayaa looga hadlaye Sidii loo sameyn lahaa Gole Deegaan iyo Qodobo kale.
Muddo ballameedka Shirka oo ahaa Muddo Saddex Ceshe ah ayaa loosoo koobay Arrimo la xiriira Doorashada Deegaanada Maamulka Somaliland berri ka bilaabaneysa.
Inta uu Shirka Socday ayaa looga hadlaye Sameynta Gole Deegaan, waxayna ka qeyb galayaashu Sheegeen in aanan deegaanada qaarkii suurto gal noqoneen in Gole Deegaan loo sameeyo sababo Amni awgii.
C/llaahi Maxamuud Xasan Xoghayaha Joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiisiinta Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa Warbaahinta u aqriyey Warmurtiyeedka kasoo baxay Shirka.
1-Golohu waxa uu bogaadinayaa Howlaha ugu qabsoomay Xog wadaagista arrimaha xasilinta dal, dhisidda golaha deegaanka, dib u heshiisiinta dalka iyo wada shaqeynta golaha.
2-Dhisidda Gole Deegaano oo laga bilaabayo Degmooyinka Hor tabinta leh oo ku kala yaal:- Jubbaland, Koofur Galbeed, Galmudug, Hir-Shabeelle iyo Gobolka Banaadir.
3-Golaha Deegaanka waxa ay bogaadinayaan Sameynta golaha Deegaanka ee laga hirgeliyey Degmada Xudur iyo degmooyinka kale ee Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed.
4-Golaha waxa uu ku dhiiri gelinayaa Hir gelinta golaha deegaanka ee ay wadaan Jubbaland iyo Koofur Galbeed.
5-Goluhu waxa uu ku dhiiri galinayaa Dowlad Goboleedyada Galmudug iyo Hir-Shabeelle Da dajinta Dhayemstirka Shuruucda Dowladaha Hoose si ay u sameeyaan.
6-Goluhu waxa ay isku raaceen in lama taabtaan tahay qoondada Haweenka ee Golayaasha Deegaanka, dowlad goboleedyandane looga fadhiyo in ay meel mariyaan.
7-Goluhu waxa uu isla qaatay in lagu socdo Muhiimadaha horgalinta u leh wasaaradaha Arrimaha gudaha Dowladda federaalka iyo Dowlad Goboleedyada, Xasilinta, dib u heshiisiinta, hormarinta Dowladaha Hoose iyo doorashooyinka
8-Goluhu waxa uu Soo Jeedinayaa in la dardar geliyo Dhaqaale loo helo wadahadalka Bulshada, si loo taaba geliyo nabad iyo degenaashiyo bulsho waarta.
9-Goluhu waxa uu soo dhaweynayaa wixii kasoo baxay Shirkii 3-aad Wada shaqeyntii kasoo baxay iyo Kaalintii ay ku laheyd Dowladda federaalka, iyagoona soo jeediyey in la dhaqan galiyo heshiiskaas oo dhex maray Dowladaha hoose ee dowlad goboleedyada.
10-Goluhu waxa uu soo jeedinayaa in la qabto shir farsamo oo lagu cayimayo baahiyada shir la qabto labada sano ee soo socota, ee Dowladaha Hoose.
11-Goluhu waxa uu soo jeedinyaa in la qabto kulan aqoon isweydaarsi oo lagu lafa gurayo oo u dhaxeeya wasaaradaha Dowladda Federaalka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada ee Heer Federaal.
12-Goluhu waxa uu dhiira gelinayaa in la dardar geliyo Maqaamka Muqdisho, Lana mariyo tala gelin dhameystiran si loo helo ka qeyb galka dadweynaha iyo bixinta adeegyada Bulshada.
13-Goluhu waxa uu ku heshiiyey In la sameeyo Hannaan Mideysan oo lagu socdo Fulinta Kormeerka iyo Qiimeynta Mashaariicda Xasilinta iyo Hormarinta Dowladaha Hoose ee Wadajir.
14-Goluhu waxa uu soo jeedinayaa in Wasaaradaha Dowlad Goboleedyada ay soo gudbiyaan Qof xiriiriya Mashaariicda Wadajir.
15-Goluhu waxa uu soo jeedinayaa in La mideeyo, la isku xiro danaha Heer federal ee Dowladda Dhexe iyo Dowlad Goboleedyada, gaar ahaan Kaalmada Caalamiga ah.
16-Goluhu waxa uu fariin cad u dirayaa Hay’adaha Ka shaqeeya arrimaha xasilinta dowladaha hoose iyo dib uheshiisiinta, kana shaqeeyaan waxyaabaha uu goluhu isku raacay iyo Siyaasadda Dowladda ee ku Aadan Arrimaha Kor ku xusan.
17-Goluhu waxa uu Deeq bixiyaasha Taageera Mashaariicda Wadajir iyo Bah wadaagna nala fulisa, Waad Mahad san tihiin.
Previous articleSomali Islamic Online oo ku soo kordhiyay fasalo cusub barashada Quraanka
Next articleSaad Hariri oo beeniyay in lagu xirey magaalada Riyad